Bob Ross: Ilay mpampianatra mahafinaritra isaky ny mpizahatany solika tokony ho fantatra | Famoronana an-tserasera
Te handoko solika ve ianao nefa mila fotoana maharitra hamitaana ny asa? ¿Te hahay handoko mora foana ianao Mahatalanjona tsara tarehy avy any an-tranonao, malalaka sy miaraka amin'ny mpampianatra tsara indrindra? Ity ny hafatrao.
Robert Norman Ross, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Bob Ross (1942 - 1995) dia mpanao hosodoko amerikanina, mpampianatra ary mpanolotra izay nahita fahombiazana lehibe noho ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra tamin'ny taona 80 sy 90, Ny fahafinaretana hoso-doko o Ny fifalian'ny sary hosodoko.
Saingy tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, noho ny YouTube, rehefa nahatratra ny fahombiazany lehibe ilay mpampianatra malaza volo Afro, narahin'olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao ilay fandaharana.
Fa inona izany no tena mahomby?
1 Lokoy ny hazo kely falifaly na hazo faly
2 Nianatra tamina mpampianatra mahay izy
3 Namolavola ny teknika mando-on-wet
4 Tao anaty antsasak'adiny fotsiny no nandokoany asa lehibe
5 Karisma lehibe
Lokoy ny hazo kely falifaly na hazo faly
Ny fitiavany fatratra sy ny feony malefaka dia mahatonga ny antony handokoana ny tontolo miavaka amin'ny olona, ​​na tia mandoko izy ireo na tsia. Bob Ross dia mahatonga anao ho voatarika hiala ary hitandrina ny lesoka nataonao ho toy ny lozam-pifamoivoizana kely Sambatra na lozam-pifamoivoizana Sambatra, raha tsy izany tsy ho tsara ny sary Ny sangan'asany dia nampipoitra ny velaran-tany mahavariana an'i Alaska, toerana nonenan'ilay mpanao hosodoko taona maro taorian'ny nifindrazany avy tany Florida, nahaliana ny toetran'io toerana io. Feno hazo faly Sambatra izy ireo, na hazo faly, rahona kely falifaly na rahona sambatra sns.
Nianatra tamina mpampianatra mahay izy
I Bill Alexander no mpampianatra azy, mpanao hosodoko alemanina nanolotra tamin'ny fahitalavitra Ny majika fandokoana menaka, ny fandaharana teo alohan'ny Ny fahafinaretana hoso-doko. I Ross, izay niasa tamin'ny naha teknisianina fanaovana firaketana ara-pitsaboana tao amin'ny tafika, dia nijery ny fampisehoana ary nanara-dia an'i Bill Alexander. Niainga ho tonga toa azy izy ary nandoko tamin'ny fotoanany tsy ho toy ny fiatoana amin'ny asany, izay nahatonga azy ho sergent voalohany, izay nanery azy ho lehilahy be fitakiana sy henjana amin'ny hafa, izay halany.
Namolavola ny teknika mando-on-wet
I Bill Alexander no mpialoha lalana an'io teknika io (na dia misy mpanao hosodoko aza nanomboka ny taonjato faha-XNUMX izay nampiasa azy, dia fantatra amin'ny fanaovana azy ho malaza izy), i Bob Ross dia namolavola azy tamim-pahakingana. Miorina amin'ny sary hosodoko foana amin'ny lamba firakotra lena, manampina sosona loko tsy misy fanamainana (toy ny mazàna nolokoina tamin'ny teknika nentim-paharazana), amin'ny fomba itovizan'ny loko sy hamoronana vokany hafa. Ny fototr'ity sary hosodoko ity dia, miafina ankehitriny. Bob dia nampihatra ny Liquid Clear, fananana fananan'io programa io ihany. Inoana fa misy karazana menaka mahatonga ny loko hiseho ho mamiratra sy maro loko kokoa.
Tao anaty antsasak'adiny fotsiny no nandokoany asa lehibe
Iray amin'ireo endrika mahataitra indrindra amin'ny fandaharana amin'ny televiziona ny Ross dia nanao ny sangan'asa kanto mahavariana tao anatin'ny… antsasak'adiny fotsiny! Noho ny teknika lena-mando, ny sary hosodoko dia azo atao amin'ny hafainganam-pandeha haingana, mba tsy ho maina izy ireo mba tsy hahomby io teknika io. Ross dia nitady tamin'ny fahatanorany fomba fandokoana mamela anao hamita sanganasa marobe ao anatin'ny fotoana fohy, hivarotra azy ireo avy eo ary hahazo bonus. Ny sanganasa nataony nandritra ny fandefasana ny fandaharana dia natolotra tamin'ny fototra, izay nanao lavanty azy ireo hanohanana ireo sahirana.
Araka ny efa nolazainay, Bob Ross dia nanana charisma teo alohan'ny efijery. Tsy noho ny fitiavana nandokoany ny hosodoko ihany ary niresaka tamin'ny mpijery izy, fa koa ho fampisehoana fitiavana ny biby. Tamin'ny seho maro dia niresaka taminay i Ross momba ny fiarovana ny tontolo iainana ary nahazatra ny fitondrana squirrels sy biby hafa hametraka fanabeazana ny olona momba ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny natiora.
Androany dia misy sekoly mitondra ny anarany manamarina ireo mpampianatra mampivelatra ny teknikan'izy ireo manerantany. Ny azo antoka dia ny hoe na iza na iza afaka miala voly mahafinaritra sy miala sasatra miaraka amin'i Bob Ross.
Inona no andrasanao manomboka handoko amin'ny menaka toy ny mpanakanto marina?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Bob Ross: Ilay profesora mahatalanjona tokony ho fantatry ny mpizahatany solika rehetra